Simeone Oo Qiray Inuu Cadho Kaga Baxay Garoonka
HomeSpainSimeone Oo Qiray Inuu Cadho Kaga Baxay Garoonka
Waxay noqon lahaayeen horyaalka haddii ay badin lahaayeen kulankii xalay ee Malaga, laakiin may dhicin, taasina waxay ka xanaajisay tababare Diego Simeone oo sheegay inuu cadho ka qaaday kooxdiisa markii ay barbar dhac la gashay Malaga.
“Waa wax laga cadhoodo marka aad wax walba samayso ee aad guulaysan weydo, ciyaartooyadu wax walba way sameeyeen. Hadda fursadda aanu haysannaa waa boqolkiiba konton (Kulanka Barca) sida faynallada kaleba” ayuu yidhi Simeone oo la hadlay wariyeyaal markii ay ciyaartu dhamaatay.
“faallo kama bixinayo cidda nala loollamaysa, mana aha wax sahlan iyo in ay sidan oo kale dhacayso xili-ciyaareedkaas dheeraa. Anigu waxaan kubadda ciyaarayay 20 sannadood waanan fahmi karayaa waxa dhacaya.
“Waannu daalannahay, waxa ay kooxdani samaynaysa runtii waa wax layaab leh. Waxay bixisay dedaal badan waxaanan filayaa inaanu ku guulaysan doono Camp Nou” ayuu yidhi.
Simeone waxa uu sheegay in kooxdiisa looga baahan yahay in aanay is dhiganin ee ay xaqiiqada waajahaan oo ay ku dedaalaan inay garaacaan Barca.
Kulankii xalay ee Vicente Calderon ku dhex maray Atletico Madrid iyo Malaga, waxa ka maqnaa weeraryahanka Diego Costa, waxaanu tababare Diego Simeone shaaciyay in uu dhaawaca ciyaartoygaasi horumar sameeyey oo uu filayo inuu bogsado ka hor kulanka Barca.
Atletico waxa ay waajahday Barcelona shan jeer sannadkan tartamada oo dhan, waxay barbar dhac galeen afar jeer, kulanka kalena waxa guulaysatay Atletico.
Mexico 1-0 Camaroon : Maroodiyadii Afrika Oo Ku Bariiqday Mexico
Xurgufta Ka Dhex Curatay Pepe & Busquets Oo Soo Jiidatay Alonso, Iyo Colaad Dib Uga Dhex Dillaacday Laba Kooxood
Pele Innankiisa Oo 33 Sanno Oo Xabsi Ah Lagu Xukumay
Wiil uu dhallay boqorka kubada cagta aduunka ee Pele oo lagu magacaabo Edinho, ayaa lagu xukumay 33 sannadood oo xabsi ah kadib markii lagu hellay inuu u gudbiyo lacagaha faraha badan ganacsatada daroogada waarida ee wadamada Koonfurta Amerika.